Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Adoo addoon u shaqaynaya 20 sano? Waa lagaa eryey!
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Envoy Air waa diyaaradda ugu weyn gobolka ee u qaadda American Airlines.
U shaqaynta diyaarad noocaas ah muddo 20 sano ah waxay ka dhigan tahay u heellannaan iyo shaqo adag. Waxaa laga yaabaa inay marmar dareento inaad addoon u tahay shaqadaada.
Markaad u shaqaynayso Ergayga, waa inaadan caban. Sidoo kale marna ma tixraaci kartid Rush Hour, filimka Jackie Chan.
Waxaa laga yaabaa in lagu eryo.
Warqad ku socota Caydiid Hawada maamulka oo ku taariikhaysan Ogosto 25, 2021, qareenka New York Lee Seham waxay qaadataa Envoy Air, oo xiriir la leh American Airlines, si ay shaqada uga joojiso saddex shaqaale oo ay isku tilmaameen inay yihiin “addoomo” isla markaana soo xiganaya xariiqda filimka Jackie Chan. Rush Saacadda iyada oo macneheedu yahay sharraxaadda in tixraaca aan loogu talagelin in lagu xumeeyo dadka kale.
Saddexda shaqaalaha ah - Losaolima Fonokalafi, Faye Tuala, iyo Asefash Asfaha - mid walba wuxuu leeyahay in ka badan labaatan (20) sano oo ah kala sareyn. Waxay yihiin, siday u kala horreeyaan, muhaajiriin ka yimid Tonga, Samoa, iyo Eritrea (Afrika), waxaana u shaqaaleeyay Ergayga Khubarada Xakamaynta Alaabada.
Ergaygu wuxuu helay sabab uu ku joojiyo Marwo Fonokalafi sababta oo ah, iyada oo ka jawaabaysa faallo uu farsamayaqaan diyaaradeed ku sheegay in ay aad u shaqeyneyso, waxay oggolaatay in iyada iyo qofka la shaqeeya ay u shaqeeyeen sidii “addoomo”.
Toddobaadkii xigay, qof caddaan ah oo la shaqeeya ayaa ka hor yimid Ms. Fonokalafi oo ku saabsan faalladeeda wuxuuna ku andacooday in “Nolosha Madow ay muhiim tahay.” Marwo Asfaha-oo ah Afrikaan Mareykan ah oo ku dhalatay Eritrea-ayaa u timid difaaca saaxiibkeed iyada oo u sharraxday in Ms. Fonokalafi ay ka timid Tonga oo ay lahayd waayo-aragnimo nololeed oo ka duwan tii ay ku eedaysay.
Marwo Asfaha waxay isbarbar dhig ku samaysay saaxiibkii dembi-baadhaha bilayska Shiinaha ee filim aflaam ah kaas oo si aan ku talagal ahayn uga sheegay hadal aflagaado ah baar ay si gaar ah u ilaaliyaan African-Americans, waxayna ka codsatay Marwo Tuala in laga caawiyo dib u soo celinta filimka iyo muuqaalka. Marwo Tuala ayaa bixisay magaca filimka iyo xigasho la xiriirta si ay uga caawiso Marwo Asfaha sidii ay u sharxi lahayd marwo Fonokalafi.
Ergaygu wuxuu shaqada ka joojiyay Marwo Fonokalafi iyo Ms. Tuala oo lagu eedeeyey inay tixraacaan "addoon" aan habboonayn iyo sababta oo ah waxay "soo xigteen khadadka filimada" oo ahaa meel ka dhac. Ergaygu wuxuu shaqada ka joojiyay Marwo Asfaha oo lagu eedeeyay inay soo xigatay isla khadadka filimka.
Mr. Seham warqadiisii ​​Ogosto 25 -keedii, oo Ergayga siisay tusaale ka yimid Guddiga Xiriirka Shaqada Qaranka, ayaa ku qornaa in shaqaaluhu uu xaq u leeyahay sharciga shaqaalaha federaalka si uu u caddeeyo cabashooyinka ku saabsan xaaladeeda shaqo iyada oo adeegsanaysa luqaddaas. Wuxuu kaloo ku dooday:
Qowmiyad kasta waa la addoonsaday oo waa la addoonsaday kuwa kale. Khilaafkii ugu horreeyay ee caalami ah ee jamhuuriyaddeennu wuxuu jawaab u ahaa budhcad -badeedda Afrikaanka ah ee addoonsaday in ka badan hal milyan oo badmaaxiin Yurub iyo Caddaan Maraykan ah. Luqadda Ingiriisiga, erayga “u shaqaynta sidii addoon” ama “addoonkii mushaharka” waa hadal sarbeeb ah oo caadi ah oo aan micno lahayn marka laga reebo in qofku si adag ugu shaqeynayo magdhow aan badnayn.
Seham wuxuu kaloo ku dooday in joojinta shaqaalaha cimriga dheer tixraaca filim caan ah oo soo xareeyay in ka badan $ 245 milyan oo adduunka oo dhan ah aysan qiil noqon karin, gaar ahaan marka ujeeddada tixraaca aysan ahayn in la xumeeyo laakiin kor loo qaado fahamka. Waxaa intaa dheer, qofka keliya ee Afrikaanka Mareykanka ah ee xilligaas joogay wuxuu ahaa Marwo Asfaha, oo Ergaygu shaqada ka joojiyay.
Bishii Ogosto 30keedii, Ergaygu wuxuu Mr. Seham ugu jawaabay inay "ka shaqaynayso ururinta xogta kiiskan."
13.3 milyan oo yurub ah ayaa yimid si ay u kaxeeyaan dalxiiska Khaliijka ...
Dhallinyaro Hadda La Dagaalanta Xiisadda Cimilada ee Milan
Laga soo bilaabo Super Fun Hot Spot ilaa Darbiyada Amniga iyo Ilaalada
St. Kitts & Nevis oo Diiday Galitaanka Dadka Socotada ah ...
Socdaalka Mareykanka: Ka fogow dib -u -dhac aan loo baahnayn oo xagga dhaqaalaha ah ...
Kalkaaliyeyaasha Ontaariyo: Walaaca weyn ee Qorshaha Dib-u-furista Cusub
Doon la buufin karo ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradaha Canary, 52 qof ...
Safarrada Bikrada Hadda waxay u shiraacayaan Nassau iyo Bimini
YouTube-ku wuxuu ballaariyaa mamnuucidiisa DHAMMAAN waxyaabaha ka-hortagga tallaalka